बालकृष्णलाई कसले खुवायो विष ? « Kakharaa
बालकृष्णलाई कसले खुवायो विष ?
१० भदौ, काठमाडौं । गत साता अचानक अस्वस्थ भएका भारतस्थित पचञ्जलि योगपीठका प्रभावशाली व्यक्ति आचार्य बालकृष्णलाई कसैले विष खुवाएको खुलासा भएको छ।
नेपालको स्याङ्जामा जन्मिएका आचार्य भारतका प्रभावशाली योग गुरु रामेदेवका मुख्य सहयोगी हुन्।
कृष्ण जन्माष्टमीका दिन भक्तले उपलब्ध गराएको प्रसाद ९पेडा० खाँदा अचानक बिरामी भएका आचार्य बालकृष्णको स्वास्थ्यमा सुधार देखिएको छ। पेडा खाएपछि बेहोस भएका आचार्यलाई तत्काल पतञ्जलि स्वामित्वामा रहेको अस्पतालबाट अर्कै अस्पतालमा सरुवा गरिएको थियो।
आचार्यलाई पेडामा विष मिसाएर खान दिएको आशंका गरिएको छ। नेपालमै औषधि उत्पादन गरी बजार विस्तार गर्ने योजनासहित पटकपटक नेपाल आएका आचार्य बालकृष्णको फुड प्वाइजन भएको वा होइन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सोमबार बिहान नेपाल फर्कनुअघि पतञ्जलि योगपीठ नेपालका अधिकारीसँग कुरा गर्दै बाबा रामदेवले आचार्य बालकृष्णलाई कसैले पेडामा विष मिसाएर खुवाएको र त्यसविषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए। नेपाल समाचारपत्र दैनिकले खबर छापेको छ ।
१४ सहरमा डेटा सेन्टर निर्माणका लागि एयरटेलसँग वर्ल्डलिङ्कको सहकार्य
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशन्सले देशका १४ सहरमा डेटा सेन्टर निर्माणको
बाख्रा हराएपछि गाली गर्ने डरले बझाङमा बालिका झुण्डिइन्
बझाङ । बझाङमा आइतबार एक बालिकाले आत्महत्या गरेकी छन् । दुर्गाथली गाँउपालिका ३ रकैलकी ११
बागलुङको दुर्गम गाउँका महिला ढाका बुनाइमा व्यस्त, समयको सदुपयोगसँगै आम्दानी पनि
बागलुङ । दुर्गम तामान गाउँ अहिले ढाका बुन्ने महिलाहरूको गाउँ भनेर चिनिन थालेको छ ।
एसएलसीको किर्ते प्रमाणपत्र बनाउने डाक्टरहरू पक्राउ
काठमाडौं । एस.एल.सी.को प्रमाणपत्र किर्ते गर्ने डाक्टरहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । किर्ते मार्कसिटको आधारमा